🥇 ▷ Keena sirta qarsoon ee ugu dambeysay ee iPhone 11? Shaqaalaha AppleFactory xoqitaanno ✅
Keena sirta qarsoon ee ugu dambeysay ee iPhone 11? Shaqaalaha AppleFactory xoqitaanno
Faahfaahin badan oo ah iPhone 2019 iyo iPhone 11 ayaa hadda lagu muujiyey milkiilaha xanta. Mid ka mid ah, haddii uusan ahayn qarsoodiga ugu dambeeya ee taleefannada Apple Mobile hadda wuxuu khiyaameeyay shaqaale warshad lagu eedeeyay iyo wax lala yaabo – shakiga ayaa wali habboon.
Isha warka xasaasiga ah waa shaqaale warshad aan qarsoodi ahayn oo ka tirsan Foxconn – shirkadda soo saarta qandaraaska Apple (websaydhka Zhihu oo loo maro MacRumors) Inta badan wararka xanta ah ee aan horey u ognahay, ayaa la xaqiijinayaa oo keliya. Si kastaba ha noqotee, gebi ahaanba waa macluumaad ku saabsan qaabeynta taleefannada AppleCell. Ninka aan garanaynin ayaa u maleynaya inuu ogyahay in Apple uu go’aansaday inuu ka saaro magaca iPhone gadaasha aaladda ayada oo aan la adeegsan. IPadku waa inuu lumiyaa “iPhone”.
Iyada oo cabirrada taleefannada AppleMobile aysan baddali doonin sannadka 2019, waxay ku sii jiraan cabbirrada kuwii kaa horreeyay:
iPhone 11 oo aan lahayn “iPhone” kiiska – awood Apple ma dhabbaa?
Wuxuu u dhawaaqayaa waxoogaa aan caadi aheyn markii hore, in kastoo Apple laga yaabo inuu runtii rumeysan yahay in muuqaalka iPhone uu hadda yahay mid sifiican u kala soocaya – sumad cad ayaa markaa noqonaysa mid aan loo baahnayn. Marka laga soo tago xaqiiqda ah in in yar oo adeegsadayaashu aysan weligood arkin iyaga – si ay uga mahadceliyaan kiisas kala duwan oo taleefanka casriga ah uu badanaa baaba’o. Boos celinta ayaa ah mid ku habboon wararka xanta ah, maadaama aysan jirin il kale oo tan lagu xaqiijiyo.
Xitaa macluumaadka loo yaqaan ‘Notch (notch bandhigay’) waxay u badan tahay inay sii jiri doonaan sannadka 2019, laakiin mustaqbalka, iPhone-ka ayaa laga yaabaa inuu u ekaado sidan:
Xaqiijinta xanta badan ee ku saabsan iPhones-ka cusub
Sidii horeyba loo sheegay, isha qarsoon ee Foxconn sidoo kale waxay xaqiijisaa dhowr hadallo caan ah, si faahfaahsan:
IPad 11 ayaa lagu heli doonaa mid kale, midab afaraad: cagaar madow.
Muraayada gadaal ayaa qabowday, oo loogu yeero “galaas qabow”.
Ku guuleystaha iPhone XS Max wuxuu helaa batteriga weyn, xawaaraha wuxuu ka hadlayaa awood 3,969 mAh.
Dabcan, kamaradaha saddex-geeska ah ayaa sidoo kale lagu xusay, iyo sidoo kale joogteynta Hillaac iyo ciribtirka taabashada 3D ee shaashadda.
Marka laga hadlayo awooda, isha magacyadu waa 64 GB, 256 GB iyo 512 GB.
Siideynta moodeelada cusub ee iPhone-ka waxaa la rajeynayaa inay tahay Sebtember 20, 2019 – waan soo warinay. U dhiganta AppleEvent ayaa la filayaa inay dhacdo 9ka ama 10ka Sebtember. Sida had iyo jeer, GIGA ayaa si toos ah ugu tabin doona wararka.